तन्नेरीसंग प्रदेश सांसद – Hamro Abhiyan
जनताको प्रश्न जनप्रतिनिधिको जवाफ • प्रदेश-सरकार
तन्नेरीसंग प्रदेश सांसद
Written by Hamro Abhiyan
१५ पुस, वीरगञ्ज
प्रदेश २ सरकारसँग दृढ दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नभएको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै लगाएका छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा पछौटेपन हटाउँदै जन चाहना अनुसार विकासका काम हुन नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।
वीरगञ्जमा आयोजित तन्नेरीसँग प्रदेश सभा सदस्य कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रल्हाद गिरी र भिमा यादवले २० वर्षदेखि थाति रहेको जनताको चाहना केहि दिनमा पुरा नहुने बताए ।
‘प्रदेश २ मा धेरै समस्या छ, तर जल, जंगल जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति छ । तैपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना गर्न सकेन । सरकार सञ्चालन गर्ने अनुभवको कमी देखियो ।’ प्रदेश सभा सदस्य गिरीले भने ‘भाषणबाजीको काम गर्ने, एकैछिन ताली बजाईदिएपछि रमाउने किसिमका काम गर्ने, आधारभूत समस्या समाधानमा जान नजाने, सोच र ईच्छाशक्तिको अभाव देखियो ।’
उनले कर्मचारीहरु र केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको, स्थानीय सरकारमा गैरराजनीतिक अनुभव र उद्देश्य नभएका मानिस हल्लै हल्लामा जितेर आएको, तीन सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएकोे बताए । तीनै सरकार छाडा देखिएपनि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भिमा यादवले लामो समय जनप्रतिनीधि नहुँदा मान्छे छाडातन्त्रमा गईसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई अंकुश लगाउन र नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताईन् । सामाजिक विचारधारा नै परिवर्तन हुन नसकेकोले सामाजिक विभेद कायम रहेको उनको भनाई छ । तर महिला स्वयं पनि दोषी रहको तर्क उनले गरिन् ।
‘अझैपनि महिलालाई पहिलेको जमानामा जस्तै प्रताडित गर्ने, स्वतन्त्र भएर हिँड्न दिईदैन, लैंगिक हिंसा उत्तिकै छ ।’ उनले भनिन्, ‘झ्याल ढोका खुल्ला राख्नुहुन्छ भने चोर त घरमा पसेर चोरीहाल्छन् नी मैले यो कुरा भन्दा नराम्रो लाग्ला तर मोबाईल टिभी, फिल्म र ड्रेसअपले गर्दा नै विकृति फैलिएको हो । ’
उनले मेरो छोरीले कस्तो लुगा लगाएको छ ? यसमा अभिभावक जिम्मेवार बन्नुपन्र्ने बताईन् ।
प्रदेशको नाम नराख्दा दुई नम्बरी प्रदेश भने जिस्क्याउँन कहिले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनुहुन्छ त ? भन्ने तन्नेरीको जिज्ञासामा यादवले भनिन् ।
‘अरुले वागमति प्रदेश, कर्णाली प्रदेश राखेका छन्, त्यसैगरि हामीले नारायणी प्रदेश राखेर भएन ? सोचीराखेका छौं, पाँच वर्षमा त अवश्य नाम राखिसक्छौं ?’ उनले हाँस्दै भनिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य गिरीले नाम र राजधानीका लागि प्रयास गरेको भएपनि टुंगो नलागको र अब बस्ने संसद बैठकहरुमा छलफल हुने बताए ।
तन्नेरीहरुलाई गुनासो होईन, प्रश्न गर्ने बानीको विकास गराउन यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको हाम्रो अभियान पर्साका संयोजक शिवनाथ यादवले बताए । प्रश्नले जनप्रतिनीधिलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउने उनको भनाई छ ।
कलैयामा तन्नेरीसँग मेयर, साढे ३ वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको दावी
जनताको प्रश्न जनप्रतिनिधिको जवाफ
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का स्थानीयहरु सँग
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष प्रदीप...